Iindaba -Uyikhetha njani iFilitha yeTanki yeNtlanzi efanelekileyo
Ungayikhetha njani iFilitha yeTanki yeNtlanzi efanelekileyo
Xa kuthelekiswa nokusingqongileyo kwendalo, ubuninzi beentlanzi kwi-aquarium bukhulu kakhulu, kunye ne-excreta yentlanzi kunye nentsalela yokutya ingaphezulu. Ezi zidiliza kwaye zikhuphe i-ammonia, eyingozi ngakumbi kwiintlanzi. Okukhona inkunkuma ingaphezulu, kokukhona i-ammonia iveliswa ngakumbi, kwaye ngokukhawuleza umgangatho wamanzi uya uba. Icebo lokucoca ulwelo linokucoca ungcoliseko lwamanzi olubangelwa lilindle okanye isithiyelo esishiyekileyo, kwaye inyuse ngokufanelekileyo ioksijini enyibilikileyo emanzini. Sesinye sezixhobo ezingenakho ukusilela kwinkqubo yokondla.
Icebo lokucoca ulwelo ngaphezulu
Icebo lokucoca ulwelo eliphezulu lithetha inkqubo yokuhluza ngaphezulu kwetanki yentlanzi, eyinyani nayo.
Umgaqo osebenzayo wokucoca ulwelo oluphezulu kukuba impompo yamanzi iya kufakwa kwitanki lokucoca ulwelo, emva koko iphinde ibuyele kwitanki leentlanzi ngeendlela ezahlukeneyo zokucoca ulwelo kunye nomqhaphu wokucoca ulwelo. Emva koko iphinda ibuyele kwitanki leentlanzi ukusuka kumbhobho wokuphuma ezantsi.
Izinto eziluncedo kwiifilitha
1. Ixabiso eliphantsi
2. Ukugcinwa kwemihla ngemihla
3. Iziphumo zokucoca ngokwasemzimbeni zilunge kakhulu
4. Akukho mfuneko yendawo eyahlukileyo
Ukusilela kwesihluzo esingaphezulu
1. Ukudibana nomoya ngakumbi, icarbon dioxide kulula ukuyilahla
2. Ihlala kwindawo ephezulu ye-aquarium, kwaye ukusebenza kwayo kubuhle.
3. Inxalenye ephezulu ye-aquarium ihlala, kwaye indawo yokufakwa kwezibane inciphile.
4. Ingxolo enkulu
Icebo lokucoca ulwelo eliphezulu liyacetyiswa xa kuthelekiswa noku kulandelayo
1. I-Aquarium ikakhulu yenziwe ziintlanzi kunye ne shrimp
2. I-Aquarium eneentlanzi ezinkulu njengowona mzimba uphambili
Ukusetyenziswa kwesihluzi esingaphezulu akukhuthazwa kwezi meko zilandelayo
1. IVAT yeendiza
2. Abasebenzisi abakhathalele ingxolo
Icebo lokucoca ulwelo lwangaphandle
Icebo lokucoca ulwelo langaphandle limisa icandelo lokucoca ulwelo kwicala okanye ngaphezulu. Amanzi atshizwa kwitanki lokucoca ngempompo enamanzi, ahluzwe ngesixhobo sokucoca, emva koko angene kwi-aquarium.
2.Sayizi encinci, kulula ukuyicwangcisa
3. Ayingeni kwindawo ephezulu ye-aquarium, kwaye ineendawo ezininzi zokufaka isibane.
4. Kulula ukufunxa ioksijini
1. Ukuhluza okungalunganga
2. Ukudibana nomoya ngakumbi, kulula ukuphulukana nekharbon diokside
3. Ngamanqanaba ahlukeneyo amanzi, kuhlala kukho isandi sedriphu
4. Izinto zokucoca kufuneka zitshintshwe amaxesha ngamaxesha.
Iifilitha zangaphandle zisetyenziselwa olu hlalutyo lulandelayo
1. Isetyenziswa njenge-aquarium ukukhulisa izityalo ezincinci zasemanzini kunye neentlanzi zetropiki ezingaphantsi kwe-30cm
2. Abasebenzisi abafuna ukulawula iindleko
Izihluzo zangaphandle azikhuthazwa kwezi meko zilandelayo
I-Aquarium enkulu kunye naphakathi
Amagqabantshintshi okucoca ngaphakathi
2. Ukusekwa okulula
3. Unikezelo lweoksijini olwaneleyo
4. Ifakwe kwi-aquarium kwaye ayihlali kwindawo yangaphandle
Ukungancedi kokucoca ngaphakathi
1. Ilungele kuphela i-aquarium encinci
2. Ukuhluza okungalunganga
3. Kukho isandi somoya
4. Izinto zokucoca kufuneka zitshintshwe rhoqo.
5. Ikwachaphazela ubuhle be-aquarium
Icebo lokucoca ulwelo elakhelweyo linconyelwe ezi meko zilandelayo
Iifilitha ezakhiwe azikhuthazwa xa
I-Aquarium ngaphezulu kwama-60 cm
2. IVAT yeendiza
Icebo lokucoca ulwelo (umoya wamanzi)
Icebo lokucoca ulwelo lwesiponji luhlobo lwecebo lokucoca ulwelo olufuna ukudibanisa impompo yeoksijini kunye nethumbu lomoya, elinokuthi lifakwe adsorbed eludongeni lwe-aquarium. Ihlala ilungele iisilinda ezincinci kwaye inokusetyenziswa njengezihluzi ezincedisayo kwiisilinda eziphakathi.
Umgaqo kukusebenzisa umphumo wokukhupha amanzi xa ibhabhu emanzini inyuka, enokufumana ngokufanelekileyo ilindle kunye nesithiyelo sentsalela. Ukongeza, ibacteria yefilter yokuhluza inokubola ngokufanelekileyo into ephilayo, ngaloo ndlela kufezekiswe injongo yokuchithwa kwempahla kwindawo encinci.
Ixesha Post: Sep-23-2020